Obbolaan lakkuu afur, cidha guyya tokko raawwachuufi - BBC News Afaan Oromoo
Obbolaan lakkuu afur, cidha guyya tokko raawwachuufi
Goodayyaa suuraa Obbolaan kunnee amma qophii cidhaa taasisaa jiraachu himu
Obboolaan afran kunneen jiraattota biyya Hindii kan kutaa biyyaa Keraalaa jedhamuuti. Jireenya isaanii guutuu mana tokko keessa kan waliin jiraatan yoo ta'u, nyaata wal fakkaatu soorataafi uffannaa wal fakkatu uffachuun jiraatan.
Hanga umuriin 15 guutanittis mana barnootaattis teessooo wal fakkaataa irra taa'aa akka turan dubbatu.
Amma obboolaa afranuu guyyaa tokkootti heerumuuf qophii taasisaa jiru.
Isaan malees shannaffaa kan isaan waliin dhalate obboleessa dhiiraa qabu. Isaaniis akkanaan seenaa isaanii BBC'tti himan.
Lakkuu walfakkeenya adda ta'e qaban
Obboolaa dubaraa afur Uthra, Uthraja, Uthara, Uthama fi obbooleessi isaanii Uthrajan Sadaasa 18, 1995 dhalatan. Isaanis Ebla dhufaa gaa'ila raawwachuuf karoorfataniiru.
"Cidha keenya ilaalchisee haasaan hundi maatii keessatti xumurameera. Guyyaa gammachuu keenyaaf uffannaa aadaa bitachuutu nu hafe. Garuu ammoo dizaayinaa fi halluu walfakkaatu bitanna,'' jetti Uthaaraan.
Goodayyaa suuraa Kabajni guyyaa dhalootaa keekii hedduun kabajama ture
Isheenis gaazexeessitu yoo taatuu kaadhiimaan shee riippoortara.
Gaa'illi isaniis haala aadaa naannoo sanaatiin kan raawwatamu ta'a. Dhiiroonni hirriyyaa gaa'eelasaanii filachuurra, miseensota maatii gaheessootaatu kan ta'u filataaf.
Haala kanatti ammoo haadha isaanii Reemaa Deeviiti shamarreen ishee akka abbaa warraa isaaaniif ta'u fialataniif isaan gargaare.
Kunis karaa marsariitiin kan raawwatameedha.
Yeroo baayyees gaa'illi miseensoota maatii wal fakkaattanii kunis kan dinagdee fi barnootaan wal fakkaatan jidduutti kan raawwatamudha.
Haa ta'u malees kun gaa'ila dirqiin raawwatamu miti. Shamarreefi gurbichi yaada isaanii ni kennu.
Fuulbaana dhufaattis sirni qubbeellaa godhachu ni raawwata. Ta'us ammoo kaadhiimaawwan dhiiraa afran keessaa sadan isaanii biyya jiddugala bahaa waan hojjataniifu sirna kanarratti hinargaman.
Shamarran arfan kunneenis haalli sirna gaa'ila saanii akka wal fakkaatuuf kan danda'ameef hunda raawwataa jiru.
Amalaan adda adda ta'uun wal gargaaraa turan illeen shammarreewwan kunneen arfanu guyyaa dhalotaa saanii kaasee haala wal fakkaatu keessa darban.
Goodayyaa suuraa Obboolaa arfan uffata wal fakkaatu male hin uffanne
Uthraja barnootaan cimtuudha. Uthama ammoo muuziiqaa waan jaalattuuf amma Vaayooliin barachuu eegalte jirti. Obbooleessi isaanii Uthrajan ammoo meeshaa muuziiqaa Hindii Taabaalaa jaalata.
Uthra ammoo dizaayina faashinii qorachuu itti fufte. Uthraja fi Uthama ammoo tekinishaanoota wallaansa hadoochuuti (anaesthesia technicians) ta'aniiru.
Wayita abbaa warraa argachuuf barbaadu eegalanittis, isaan keessaa Uthraja waggaa tokkoon dura hiriyaa argattulleen garuu murteessuuf hin muddamne.
Turuu kiyyatti gammadduudha
"Hundi keenya akka guyyaa tokkichatti heerumnuuf fedhii haadha keenyaati. Kanaafuu turuuf murteessine,'' jetti Uthraja BBC'n.
Qophiin gaa'iila Hindii baasii olaanaa waan gaafatuuf, maatii baayyeen obbolaafi firoonni irratti gumaatu.
Shamarran afuuriif yeroo garaa garaatti cidha qopheessuu haadha isaaniif baasii cimaa ta'uun alattis, sirnichi miira haadha saaniif hiikaa qabaata jedhu.
Akka carraa ta'ee dura kan hirriyaa gaa'ilaa argattee Uthraja, hirriyaanshee dafanii akka gaa'ila godhataniif hin muddine.
Jireenya kallattii haaraa
Goodayyaa suuraa Obbollees isaanii fuudhuuf karooraa hinqabu jetti Uthrajan
Uthraja nama Akash Kumar jedhamuufi ka ogummaa teeknishiyaana wallansa ofi wallaalchisuu (anaesthesia technician) Giddugala Bahaa hojjatutti heerumti.
"Duraan osoo inni gara biyya Kuweet hin imalaniin dura waliin hospitaala tokko keessa hojjataa turre. Wal beekna. Warri isaas haadha kiyyaan wal arguusaaniitti baayyee gammadoodha,'' jetti.
Osoo biyyaa hin bahiin dura bakka amma hojjatuutti waggoota lamaaf turu barbaaddi. Kana jechuunis cidha isaaniin booda baatiiwwan muraasa keessatti abbaa warraa ishee waliin walitti makamti.
Daa'imman karaa haadhaa lakkuu ta'an argitanii beektuu?
"Kunis xiqqoo cimaafi nama yaachisa. Soodaan gaariin jira. Biyya biraa deemee hinbeeku. Kana malees cidha kiyyaaf baayyee miiran eegataan jira.''
Uthraja biyya Kiweet erga galteen booda hojii akka argattu abdatti. Uthra fi Uthama akkasuma dhiiroota biyya jiddugala bahaa hojjataniitti heerumu.
Obboleessi isaanii garuu gara biyya biraa deemuun alatti biyyuma keessa hojjachu barbaada. Akkasumas gaa'ilaafis hin muddamnu.
Goodayyaa suuraa Ijoolleen kunneen waita dhalataniitti ulfinni saanii xiqqaa akka ture dubbatti haatiisaanii Rema Devi
Maatiin isaanis al tokkotti ijoollee shan argachuutti baayyee gammaduun mana isaanii "Pancharatna" ykn meetiiwwan shan jechuun moggaasan.
Daa'immanis barnoota isaanii baayyee gaarii turan illeen fayyaan isaanii baayyee yaachisaan ture.
"Wayita dhalataniitti kiloonsaanii xiqqaafi fayyaa hinqaban ture. Dafanii dafanii dhukkubsatu tures ," jechuun haala ture yaadatti haatiisaanii Rema Devi.
Abbaa saanii Prema Kumar fi Rema Devi ijoollee shanan guddisuuf baayyee xaaran. Fayyaa haadha isaanii irrratti dhiibbaa olaanaa taasiseera.
Maallaqa qaban muraasa sana hundaan gara barnoota isaanii irratti xiyyeeffataniin.
Biyya Hindiitti ijoollee dhiiraaf irra caalaan eddoon kennamaaf. Maatii hedduu keessattis dhiirri kunuunsa addaatu kennamaafi.
Garuu maatiin isaanii hunda haala wal qixaan akka kunuunsan himu. Hundaafu uffata wal fakkaatu bituuf. Kunis obbolaan yeroo baayyee uffata isaanii adda baafachuuf ni rakkatu ture.
"Kunis rakkina takkayyuu jidduu keenyatti uumee hinbeeku. Uffata waliis uffachuu omaa nutti dhagahamee hinbeeku ture," jetti Uthara.
Goodayyaa suuraa Rema Devi, abbaa warraashee boqatan waliin ijoollee kanneen guddisuuf gatii olaanaa baasan
osoo ijoollee waggaa sagala jiran ture abbaan isaani kan jalaa du'an. Innis suuqii s(stationary) qaba ture. Achirraa galii maatiin ittiin jiraatan argataa tures. Waan daldalli jalaa kisaareef bara 2004tti ofi ajeessee.
erga abbaan isanii ofi ajjeessanii booda, midiyaan biyyattii haala isaan keessatti jiran gabaase. Motummaanis haalicha dhagahuun haati akka baankii naannichaa tokko keessatti mindeeffamtu taasiiseen.
"Anisijoollee kiyya guddisuurrattin xiyyeeffadhe. Hojiin kiyyas barnootaafi nyaata isaanii kanfaluuf na gargaare,'' jeetti.
Goodayyaa suuraa Ijoollee kunuunsurratti abbaan baayyee gargaaraanii turan
Haala isaan keessa turaniin kan xuqamee doktorri olLaansaanii tokkos mana jireenyaa kennaniif. Kanaafis maatiin baayyee galateeffatu.
"Rakkinni namoota keessaa waan gaarii fidee'' jetti haatii kun gargaarsa argatan yoo ibsitu.
Ijoolleen shananu damee barnootaa fedhanii barachuun xumuraniiru.
"Haatii keenya baayyee gammadduudha. yeroo hundumaa akka of dandeenyu barbaaddi," jitti Uthara.
Waan midiyaan jedhu
Miseensoonni maatii Hindus waan ta'aniif cidhi isaaniis masaraa aadaa beekamaa keessatti gaggeeffama.
Goodayyaa suuraa Erga gaa'iila dhaabbataniin boodas akka wal yaadan dubbatu
Cidha isanii kanarratti maatii dhihoofi hirriyoota qofaatu affeerama. Riipportarootaafi kanneen suuraa kaasan akka argaman eegamu.
"Xiyyeeffannaa haawaasaa keessa galuun heebbaa,'' jetti Uthara.
Lakkuu shan dhalachuun baayyee kan barame waan hintaaneef, wayita isaan dhalatan, wayita mana barnootaa galaniifi barnoota isaanii xumuran hundaa miidiyaatti dhiyaachaa turan.
Obboolaan kunneenis attamiin sirriitti haadha isaanii akka itti gargaaran yaadaa jiru.
Kana malees gonkumaa adda akka hinbaanee dhaadatu.
"Wayita deemnee bakka garaa garaa jiraannulleen, miiraan walitti hidhamnee jirra waan ta'eef waa'ee walii niyaadna,'' jetti Thran.
Lakkuu Naayijeeriyaa: Lakkuu Naayijeeriyaa walfakkeenya adda ta'e qaban
Dubartiin Bangilaadesh ji'a tokko booda dabaltee lakkuu deesse